Semalt: Hackers 'Secrets Havadi Kuti Uzive
Zvesheni neIkorogiramu munda inouya nezvinhu zvakasiyana-siyana. Semuyenzaniso,mabhizimisi mazhinji ari kutora nzira yekutengeserana e-commerce, iyo inosanganisira kuisa mawebhusayithi nema blogs kuti atsigise maitiro avo ekutsvaga.Kune zvakawanda zvishandiso zvitsva, izvo zvinotungamirira vanhu kuburikidza nedambudziko rakaoma rekusika mawebsite - kanger pro tank 2 mod. Muchiyero chakafanana, zvishandiso zvinekushandiswa kwevanyengeri vari kufambira mberi sezvavanenge vari nani uye vari nani. Hackers vanoita kuti vawane ruzivo rwakawanda rwemunhu pamwe chetezvimwe ruzivo, izvo zvinogona kuva zvinokosha.
Vanogona kuvhara webhusaiti uye vanoita kuti vawane ruzivo rwakadai sekadhi rechikweretiruzivo pamwe chete nemamwe mashoko anobatsira. Somugumisiro, vanhu vanofanira kungwarira nekurwisana uku pamwe chete nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogonamupambi anogona kuita. Vanhu vazhinji vanoshamisika kuti vanosemesa vanoita sei maitiro avo nehupamhi hwepamusoro. Kuti mumwe arege kuvharauye kupona pangozi kuedza, kune chido chekunzwisisa kuti hackers inotengesa sei mawebhusayithi.
Zvimwe zvezvakashandiswa uye nzira dzadzo dziri mune iri murairo, wakagadzirirwaFrank Abagnale, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services.
Kurwisa uku kunosanganisira kurwisa mawebsite asina kunyorwa kuti averengedatabase yavo. Iyi hack inobvisa ruzivo rwemunhu wega semakadhi emakwereti, mazita evanhu, uye mapepaji. SQL Injection inoshandiswa achishandazvishandiso, izvo zvinogona kuverenga rudzi rwebhuku rekodhi uye kutora ruzivo rwevabereki. Iyi nzira inogona kuita kuti purogiramu isarudze data, iitekana kukanda mafaira kubva kune database kuburikidza nekuenda kure.
Kurwisana uku kunosanganisira kuita kushandiswa kwemashoko ekushandisa zvinhuyewebsite. Uku kurwisa kunosanganisira kuita kuti munhu akakurumidza aone chibatanidza chinotapukira kana faira. Somugumisiro, script inobata browser. The hackerunowana ruzivo rwemachechi, pamwe chete nemapepwords kune chero webhusaiti. Iwe unogona kudzivisa kurwisa uku kuburikidza nekunyora mashoko acho zvakaresekuisa chikwata chechipiri chekugadzirisa maitiro sezvo ruzivo runopfuura pakati pemushandisi nevhavha.
Kuita zvepabonde uye kukanganisa.
Aya ndiwo mawebsite epakona, ayo anogona kunyengedza mushumiri kupakunze kwekutumira data kune rimwe fake peji. Mashoko aya anoshandiswa nemunhu anoshandiswa anogona kuva akakosha zvikuru kune chekuchengetedzwa kwedata system. For scam attacks,munhu anoshandisa dhenda rinokosha sepaswedi uyewo kupinda muwebsite. Dzimwe zviitiko zvekurwisana uku zvinotungamirira ku-de-indexation awebsite yekutsvaga kutsvaga injini ichikonzera kurasikirwa kukuru kune kambani.
Indaneti ndeyekutsinhanisa data. Muwebsite, aUshumiri anotumira uye anogamuchira data kubva kune server kana database. Sezvo data ichifambisa, kune zvimwe zvinetso, izvo zvinowanikwa pane imwe nhanho yeprocess. Munhu wepakati anorwisa zvinangwa pakubata ruzivo urwu, izvo zvinogona kutungamirira ku kurasikirwa kukuru kwekambani yeruzivo.
Vatengesi vanobvisa mamiriyoni emari kuburikidza nekunyengera uye dzimwe nzira. Zvinokonzera vazhinjizvingaita kurasikirwa pamwe chete nekukonzera dambudziko nekurwadziwa kune avo vanobatwa. Nzira dzakawanda dzekugadzirisa matambudziko dzinobudirira kuburikidza nehuwandu hwakaoma huri izvoiri mumagungano akawanda. Pane chido chekuva nezivo yakakwana yekurwisa uku. Kuchengetedzwa kwewebsite yako uye yakovatengi vanoenderana nekubudirira kwezviyero zvakadaro. Iwe unogona kudzidza kuti vatengesi vanobudirira sei kupinda vachishandisa bhuku iri.